We Fight We Win. -- " More than Media ": တချိန် က မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို နိင်ငံတကာ က ချစ်ခင်လေးစားကြတယ်။ မီထီလာ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြောင့် မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ဖြူစင်တဲ့ပုံရိတ်ကိုထိခိုက်တော့မဲ့အနေထားဖြစ်လာပါတယ်။ နေစဉ်လိုလိုပဲ နိင်ငံတကာသတင်းစာတွေ က ရေးသားနေကြပါတယ်။
တချိန် က မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို နိင်ငံတကာ က ချစ်ခင်လေးစားကြတယ်။ မီထီလာ ဖြစ်ရပ်ဆိုးကြောင့် မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့ဖြူစင်တဲ့ပုံရိတ်ကိုထိခိုက်တော့မဲ့အနေထားဖြစ်လာပါတယ်။ နေစဉ်လိုလိုပဲ နိင်ငံတကာသတင်းစာတွေ က ရေးသားနေကြပါတယ်။
4 April 2013 Last updated at 05:41 ET
Jonathan Head: "20 boys fromaMuslim school were cut down and burned on the spot"
'White phosphorus' at protest
After Muslim neighbourhoods were levelled, only scavengers could be seen at the site of the destruction
When someone was killed, they cheered”
Win Htein MP, National League for Democracy
At least 12,000 Muslims are thought to have fled their homes because of the unrest
Monk's xenophobia So what caused this frenzy of rage and hatred?
'969 stickers' "We Buddhist Burmese are too soft," he told me. "We lack patriotic pride.
I do not want to be involved in this. Maybe they don't like the way I dress”
Many Buddhists are boycotting Muslim businesses